Inés del Alma Mía: Inés Suárez को जीवन को लागी Allende को श्रद्धांजलि | वर्तमान साहित्य
मेरो आत्माको Ines प्रसिद्ध लेखक इसाबेल Allende द्वारा एक ऐतिहासिक उपन्यास हो। 2006 मा प्रकाशित, कथानक साहसी र स्पेनिश विजेता Inés Suárez र चिली को स्वतन्त्रता मा उनको प्रमुख भूमिका को अनुभवहरु लाई बताउँछ। यो एक साँचो कथा हो कि साहसिक, घाटा र ल्याटिन अमेरिका मा धेरै देशभक्तहरुको संघर्ष, विशेष गरी स्पेनिश द्वारा चिली को कब्जा मा बताउँछ।
एलेन्डेले घटनाहरु मा एक विस्तृत अनुसन्धान गरे जुन क्रम मा काम को रूप मा विश्वसनीय बनाउन को लागी भयो।। उल्लेखनीय सम्मान को बाहेक कि Inés Suárez को लागी भुक्तान गरीन्छ, पुस्तक अनुभवहरु र अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु को विवाद झल्काउँछ, जस्तै: फ्रान्सिस्को Pizarro, डिएगो डे Almagro, Pedro de Valdivia र रोड्रिगो डे Quiroga। २०२० मा, उपन्यास को homonymous श्रृंखला प्राइम भिडियो द्वारा जारी गरिएको थियो, जो RTVE, बुमेरांग टिभी र Chilevisión द्वारा उत्पादन गरीएको थियो।
1 Inés डेल अल्मा माया को सारांश
1.1 कथाको सुरुवात
1.2 यूरोप (1500-1537)
1.3 अमेरिका मा शुरुआत (1537-1540)
1.4 चिली को यात्रा (1540-1541) र स्यान्टियागो डे Extremadura को आधार (1541-1543)
1.5 स्यान्टियागो मा आक्रमण
1.6 कठिन वर्ष (1543-1549)
1.7 पछिल्ला वर्षहरु
2 लेखक को बारे मा, इसाबेल Allende
2.1 इसाबेल Allende किताबहरु
सारांश मेरो आत्माको Ines
70 को उमेर मा, Inés Suárez É साथै Inés de Suárez— को रूप मा परिचित आफ्नो जीवन को बारे मा इतिहास लेख्न थाल्छ। यस प्रकारको डायरी लेख्ने उद्देश्य उनको सौतेनी छोरी इसाबेल को लागी यो पढ्न को लागी र उनको विरासत को लागी बिर्सन को लागी छैन। यसको अतिरिक्त, बूढी महिला एक दिन को लागी उनको कार्यहरु को लागी एक स्मारक संग सम्मानित गर्न को लागी इच्छा।
एग्नेस Plasencia (Extremadura, स्पेन) मा एक विनम्र परिवार सर्कल मा जन्म भएको थियो। आठ बर्ष को उमेर देखि, उनको सिलाई र कढ़ाई को क्षमता उनको परिवार को समर्थन मा मद्दत गरे। एक पवित्र हप्ता को समयमा जुआन डे मलागालाई भेट्नुभयो, जसलाई उनी पहिलो पल बाट आकर्षित भएको थियो। तीन बर्ष भन्दा बढी को लागी उनीहरु एक भावुक सम्बन्ध थियो। पछि उनीहरुको विवाह भयो र सारियो मलागा को लागी।
गर्भधारण गर्न नसकेर दुई बर्ष पछि, उनीहरुको विवाह शत्रुतापूर्ण भयो। जुआन आफ्नो सपनाहरु लाई पछ्याउने निर्णय गरे र नयाँ संसार को लागी उद्यम गरे, उनी Plasencia फर्के, जहाँ उनले भेनेजुएला बाट उनको बारेमा केहि समाचार प्राप्त गरे। लामो प्रतीक्षा पछि, Inés आफ्नो पति संग भेट्न शाही अनुमति प्राप्त। उनी अमेरिकाको खोजीमा उनी र स्वतन्त्रताको खोजीमा लागे जुन उनी धेरै चाहन्थे।
मेरो आत्मा को Ines ...
अमेरिका मा शुरुआत (1537-1540)
धेरै यात्रा पछि, Inés पेरू मा Callao को बन्दरगाह मा आइपुग्यो, चाँडै उनी राजाहरु को शहर (अब लीमा) को friars संग गए। त्यहाँ उनले आफ्नो पतिको बारेमा सोधपुछ गरे, र अन्तमा भेटियो एक सैनिक जो उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, यो उसलाई भन्यो कि जुआन लास सलिनास को युद्ध मा मरेको थियो। त्यहाँ बाट, Inés अब उनको दिवंगत पति को बारे मा अज्ञात को जवाफ को खोज मा Cuzco जाने निर्णय गरे।
शब्द चाँडै फैल्यो कि विधवा ती देशहरुमा थियो, यस कारण को लागी, मार्क्विस गभर्नर फ्रान्सिस्को पिजारो उसलाई भेट्न चाहन्थे। Inés सोधपुछ पछि oजो पुष्टि गरे कि उनी स्पेन फर्कन चाहँदैनन्, रेजेन्टले उसलाई बस्नको लागी एउटा घर दियो। एक पटक त्यहाँ स्थापित, Inés पेड्रो डे Valdivia, जसको साथ उनी पहिलो नजर मा एक जडान थियो भेटे, त्यो क्षण देखि दुबै अविभाज्य भयो।
Valdivia चिली स्वतन्त्र गर्न चाहन्थे, जस्तै डिएगो डे Almagro एक पटक कोसिस गरीयो; जब टिप्पणी गर्न एग्नेस, उनी उनले आफुले साथ दिने बताएका छन्। उनीहरु एकसाथ राजाहरु को शहर गए Pizarro बाट प्राधिकरण अनुरोध गर्न को लागी, जो, वार्ता को एक अवधि पछि, अनुरोध स्वीकृत। A) हो, दुबै मरुभूमि मार्ग को माध्यम बाट साहसिक शुरू भयो, जुआन Gómez, डन Benito, Lucía, Catalina र धेरै सैनिकहरु संग।
चिली को यात्रा (1540-1541) र स्यान्टियागो डे Extremadura को आधार (1541-1543)
यात्रा को लागी तिनीहरूले डिएगो डे Almagro द्वारा कोरेको एक नक्शा प्रयोग गरे, जसले यो आफ्नो फिर्ता मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुन को लागी बनाईएको थियो। एक कारवाँ मा महिना पछि, सुदृढीकरण को लागी पर्खंदै गर्दा उनीहरु तारापाका मा हप्ताहरु को लागी डेरा डाले। पहिले नै जब उनीहरु आशा गुमाए, रोड्रिगो डी क्विरोगाको नेतृत्वमा पुरुषहरुको एउटा समूह कप्तानहरु जस्तै अलोन्सो डे मोनरोय र फ्रान्सिस्को डे भिल्लाग्रा को साथमा आइपुगे।
दुई हप्ता पछि, उनीहरु मरुभूमि को माध्यम बाट कठिन मिशन शुरू भयो। Valdivia, Inés, उनीहरुको पुरुष र Yanaconas पाँच महिना मा चिली भूमि पुग्न सफल भयो। फेब्रुअरी १५४१ मा, र धेरै दुश्मन को हमलाहरु लाई पराजित गरे पछि, पेड्रो डे Valdivia सान्टियागो डे ला नुएवा Extremadura को शहर स्थापित गर्ने निर्णय गरे। जग्गा बितरण गरिएको थियो र केहि महिनाहरुमा यो स्थान सबै को लागी समृद्ध थियो।
स्यान्टियागो मा आक्रमण
सेप्टेम्बर २०१ In मा, जबकि Valdivia सान्टियागो बाहिर थियो, Inés Quiroga सचेत, मानिसहरुको एक समूह को लागी उनीहरु नजिक आउँदै थिए। यस प्रकार क्षेत्र को रक्षा को लागी एक महान लडाई शुरू भयोउनीहरु स्थिति मा हावी हुन सक्षम थिए, यद्यपि शहर भग्नावशेष मा थियो, धेरै मृत र घाइतेहरु संग। Inés लडाई मा एक प्रभावशाली प्रदर्शन थियो, उनी अन्त सम्म पुरुषहरु संगै लडे।
Valdivia ४ दिन पछि आइपुग्यो; दुखी भए तापनि, उनीहरु उनीहरुलाई चिच्याउँदै: "स्यान्टियागो र स्पेन बन्द गर्नुहोस्!"
कठिन वर्ष (1543-1549)
सान्टियागो भत्किए पछि, उनीहरु सबै पेरू फर्कन चाहन्थे, तर भाल्दिभियाले उनीहरुलाई अनुमति दिएनन्। यसको सट्टा, उनले शहर को पुनर्निर्माण को लागी सुदृढीकरण को लागी Cuzco लाई सोधे; जब यो भइरहेको थियो, उनीहरु दुई बर्षसम्म गहिरो दुःखमा बाँचे। जब इन्का देश संग संचार हासिल भयो, तिनीहरूले आपूर्ति पठाए र सबै कुरा सुधार गर्न थाले, त्यसैले सान्टियागो राज्य को राजधानी घोषित गरियो।
Valdivia म असहज थिएँ, ठीक छ चिली मा अन्य क्षेत्रहरु स्वतन्त्र गर्न चाहन्थे Hजो Mapuches— द्वारा प्रभुत्व थियो र पेरू मा घटनाहरु मा हस्तक्षेप। चाँडै, उहाँ अन्य कप्तानहरु संग जानुभयो, केहि जो उनका कुनै अनुयायीहरु लाई मन परेन, जो Villagra को प्रभारी थिए। यो मान्छे को प्रस्थान पछि, Ines धोका दिएको महसुस, र समय बित्दै जाँदा उनले क्विरोगाको हातमा शरण लिए।
र 1549, ला सेरेना बाट दुई सैनिक Foundedनयाँ स्थापित शहरउनीहरु भारतीयहरु द्वारा आक्रमण भएको खबर संगै स्यान्टियागो आइपुगे। विद्रोहले उनीहरुलाई छिट्टै उछिन्ने थियो, यही कारणले बसोबास गर्नेहरुमा आतंक प्रवेश भयो। यो निर्णय गरीएको थियो कि Villagra स्थिति लाई ठीक गर्न को लागी अगाडि जान्छ, उसले एक शान्ति सन्धि हासिल गर्यो, तर यो केहि हद सम्म अस्थिर थियो, सबैजना गभर्नर फिर्ता चाहन्छन्।
धेरै महिनाको संघर्ष पछि, Valdivia पेरू छोड्न सक्षम थियो, तर चाँडै वाइसराय ला Garza द्वारा बोलाइएको थियो। पेड्रोले धेरै आरोपहरुको सामना गर्नु परेको थियो, त्यसैले उनी न्यायको सामना गर्न फर्किए। जे होस् यो मान्छे आफ्नो निर्दोष साबित भयो, सजाय मा अनुरोध छ कि Inés उसको धन छीन र पेरू वा स्पेन फर्किनु पर्छ।
Inés चिली छोडेर विरोध गरेयस कारणले रोड्रिगो डे Quiroga विवाह गर्ने निर्णय गरे, किनकि यस तरीकाले उसले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउँदैन, न त उसले छोड्नु पर्ने हुन्छ। उनले यस मानिसलाई अनन्त प्रेम र निष्ठाको कसम खाए, जसले केहि समय पहिले नै आफ्नी छोरी इसाबेलको ख्याल राखेका थिए। उनीहरु दुबै लामो समय संगै बसे Theyजब सम्म उनीहरु मरेनन् - र उनीहरु आफ्नो पहिलो आक्रमण मा Mapuches लडे।
लेखक को बारे मा, इसाबेल Allende
लेखक इसाबेल एन्जेलिका एलेन्डे Llona अगस्त 2, 1942 लीमा, पेरू मा जन्म भएको थियो। उहाँका आमा बुबा Tomás Allende Pesce र Francisca Llona Barros थिए; १ 1945 ४५ मा उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेद पछि इसाबेल आफ्नी आमा र दिदीबहिनीहरु संग चिली को यात्रा गरे, जहाँ उनी धेरै बर्ष सम्म बस्छिन्.
सन् १ 1973 in३ मा चिलीमा भएको तख्तापलट पछि, एलेन्डे आफ्नो पति र बच्चाहरु (१ 1975 to५ देखि १ 1988 from सम्म) सँग भेनेजुएलामा निर्वासनमा जानु परेको थियो। 1982 मा, उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गरे: आत्माहरुको घर; यो काम को लागी धन्यवाद, उहाँले महान विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्नुभयो। आज सम्म, प्रसिद्ध लेखक 20 भन्दा बढी किताबहरु प्रकाशित गरीरहेकी छिन्, जसको साथ उनले संसारभरि 75 मिलियन भन्दा बढी पाठकहरुलाई जितेका छन्।
उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय रचनाहरु मध्ये केहि हुन्: अनन्त योजना (1991), पाउला (1994), जनावरहरुको शहर (2002), एल Zorro: पौराणिक कथा शुरू हुन्छ, Inés del alma mía (2006), माया को नोटबुक (2011), जापानी प्रेमी (2015); र उनको पछिल्लो पोस्ट: मेरो आत्मा को महिलाहरु (2020)।
इसाबेल Allende किताबहरु
पोर्सिलेन मोटी महिला (1984)
प्रेम र छायाको (1984)
इवा लुना (1987)
अनन्त योजना (1991)
भाग्य को छोरी (1998)
Sepia मा पोर्ट्रेट (2000)
जनावरहरुको शहर (2002)
मेरो आविष्कार गरिएको देश (2003)
गोल्डन ड्रैगन को राज्य (2003)
Pygmies को जंगल (2004)
एल Zorro: कथा शुरू हुन्छ (2005)
मेरो आत्माको Ines (2006)
दिनहरुको योग (2007)
Guggenheim प्रेमीहरु। गणना गर्ने काम (2007)
समुद्रको मुनि टापु (2009)
माया को नोटबुक (2011)
रिपरको खेल (2014)
जापानी प्रेमी (2015)
जाडो बाहिर (2017)
लामो समुद्री पंखुडी (2019)
मेरो आत्मा को महिलाहरु (2020)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » मेरो आत्माको Ines
रोजा Chacel। उनको मृत्युको वार्षिकोत्सव। छनौट कविताहरु